WARARKA | Radio Danan (DBN) 94 FM | Page 1924
Home / WARARKA (page 1924)
Cod:- Cabdi Raxmaan Sabdow” Qaraxa buulo Mareer ka dhacay Wax qasaare ah Ma geysan”
September 15, 2014	Comments Off on Cod:- Cabdi Raxmaan Sabdow” Qaraxa buulo Mareer ka dhacay Wax qasaare ah Ma geysan”
kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in qarax lala eegtay gawaari ay lahaayeen ciidamada midowga africa ee amisom kaa oo ka dhacay wado xiriirisa degmada buulo mareer iyo deegaanka shalambood ee gobolka sh.hoose. ayaa warbaahinta ku hadasha afka xarakada ...
Cod:- dibad baxyo beydhaba ka dhacay
September 15, 2014	Comments Off on Cod:- dibad baxyo beydhaba ka dhacay
Wararka radio danan ee muqdisho uu ka helayo degmada beydhaba ee xarunta gobolka baay ayaa ku waramaya Dad dibad baxayaal ah oo u muuqday in lasoo abaabulay ayaa isugu soo baxay bartanaha magaalada beydhaba. Dibad baxayaasha ayaa waxaa hor kacaya ...
Ku Soo dhawaada:- Warka duhur ee Radio danan 15-09-2014
September 15, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:- Warka duhur ee Radio danan 15-09-2014
Banaabaxyo ka dhacay gobolka jubada hoose.
September 15, 2014	Comments Off on Banaabaxyo ka dhacay gobolka jubada hoose.
Dibad baxani oo ay so abaabuleen odayasha dhaqanka ee kasoo jeeda degmada hosingow ee gobolka jubada hoose Ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa mid ay kaga soo horjeedeen shirka ka furmi doona degmada kismaayo. Maxamed khaliif abuukar waxa uu kamid yahay ...
Gudoomiyaha dib u heshiisiinta”Shirka jubooyinka Mudo ayuu soo jiitamay”
September 15, 2014	Comments Off on Gudoomiyaha dib u heshiisiinta”Shirka jubooyinka Mudo ayuu soo jiitamay”
Gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta beelaha dega gobolada jubooyinka wareysi uu siiyay bar-naaamijka guuxa Wararka ee idaacada danan aya ka warbixiyay qaabka uu soconayo shirka la doonayo in maalamaha soo aadan in kismaayo ka furmo. Horey shirkan waxaa u dhaliilay ...
Cod:- Qudbadii Raisul-Wasaaraha ee Shirkii beydhaba
September 15, 2014	Comments Off on Cod:- Qudbadii Raisul-Wasaaraha ee Shirkii beydhaba
Raisul-wasaaraha xukuumada feraalka somaliya xili uu ka hadlayeye shirka maamul u sameynta koofur galabeed Somaliya ee sadexda gobol ayaa raisul wasaarha si buuxda waxaa uu ku dhawaaqay maaulka sedexda gobol. Dhinaca kale jawiga goobta ayaa mar qura is bedelay iyadoo ...
Ku Soo dhawaada:- Bar-naamijka Guuxa Wararka ee Radio danan 14-09-2014
September 15, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:- Bar-naamijka Guuxa Wararka ee Radio danan 14-09-2014
Guuxa wararka waa Bar-naamij Habeen walba ka baxa Radio danan saacadu marka ay tahay 9:30 habeen.
Shirkii Beydhaba oo Furmay Maxaa looga hadlay? (sawiro)
September 14, 2014	Comments Off on Shirkii Beydhaba oo Furmay Maxaa looga hadlay? (sawiro)
Gudoomiyaha baar-lamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah u furay shirka dib u heshiisiinta gobolada koofur galbeed somaliya. Munaasabadda furitaanka Shir weynaha dib u heshiisiinta gobollada Koonfur Galbeed waxaa kala qeybgalay Gudoomiyaha Baarlamaanka Ra’isulwasaaraha Xukuumadda ...
Ku Soo dhawaada:- Warka habeen ee Radio danan 14-09-2014
September 14, 2014	Comments Off on Ku Soo dhawaada:- Warka habeen ee Radio danan 14-09-2014
Cod:- Bare hiiraale oo shir jaraid qabtay.
September 14, 2014	Comments Off on Cod:- Bare hiiraale oo shir jaraid qabtay.
Cornel bare aadan shire hiiraale oo si weyn uga oo horjeeday maamulka jubba land, dhawaana sheegay in uu heshiis Galayo ayaa ka hadlay shirka kismaayo ka furmi doona. Kornel bare oo saxaafada shir jaraaid ugu qabtay ayaa eedeyn ujeediayay Maamulka ...
Page 1,924 of 2,248« First...1,9001,9101,920«1,9221,9231,9241,9251,926	»	1,9301,9401,950...Last »